१० सामाजिक वाणिज्य साइटहरू ड्राइभ स्टोर यातायात | Martech Zone
जब यो ड्राइभिंग यातायातको कुरा आउँछ, त्यहाँ धेरै साइटहरू र सेवाहरू छन् जुन पहिले नै छ आफ्नै दर्शकहरू जुन तपाईं पुग्न प्रयास गरिरहनु भएको छ। मलाई पक्का छ कि तपाईले पहिले नै केहि ठूला सामाजिक वाणिज्य साइटहरू जस्तै ग्रुपन र लिभिंग सोशल - को बारेमा सुनेका हुनुहुन्छ - तर त्यहाँ अझ धेरै लोकप्रियताहरू बढेका छन्। केहि विलासी सामानहरू को लागी धेरै विशिष्ट हुन्छन्, वा Moms तिर लक्षित छन्, अरू केवल तपाईंको शहर मा अर्को राम्रो चीज खोज्न कोशिस गर्दै। यी न्यूजलेटरहरू वा अफरहरूमा छनौटको गुणस्तरले उनीहरूलाई उनीहरूको श्रोताले भस्म पार्छ र तिनीहरूको लोकप्रियता विस्फोट गर्न मद्दत गर्दछ।
स्थानीय यातायात ड्राइभ खोज्ने खुद्रा व्यापारीहरूको लागि, तिनीहरू तपाईंलाई स्टोर सवारी ट्राफिक, अनलाइन बिक्री - र विशेष गरी तपाईंको क्षेत्र भित्र दृश्यता ड्राइभ गर्न उत्तम अवसर हुन सक्छ। यहाँ केहि साइटहरु को 12 उदाहरणहरु छन्। के तपाईसँग अझ छ? उनीहरूलाई कमेन्टमा साझेदारी गर्नुहोस् र नतीजाहरू तपाईंले उनीहरू मार्फत प्राप्त गर्नुभयो। यो दिमागमा राख्नुहोस् कि यी मध्ये धेरै जसो धेरै अधिग्रहण अवसरहरू छन् जहाँ तपाई एकदम सेवाहरू छोड्नुहुन्छ यातायात चलाउनका लागि।
Fab.com - तपाईं एक डिजाइनर, आपूर्तिकर्ता वा महान डिजाइन को निर्माता हुनुहुन्छ?
Eversave प्रत्येक दिन एउटा अपूरणीय स्थानीय सौदा प्रदान गर्दछ। तिनीहरूको बचतहरू पनि अनुकूलित उपहार वाउचरको रूपमा दिन सकिन्छ।
गिल्ट शहर एक अनलाइन जीवनशैली गन्तव्य हो जुन विश्वको महान शहरहरूमा सब भन्दा राम्रो अनुभवहरू क्युरेट गर्दछ। हामी अनौंठो, एक प्रकारको अफरहरू प्रदान गर्दछौं, साथै खाने, मनोरन्जन, सौन्दर्य र कल्याण सहित - हाम्रो सदस्यहरूको बढ्दो सूचीमा।
Groupon मूल्य र खोज मार्फत खरीददारहरू र विक्रेताहरूलाई जोड्दछ। यदि तपाईं एक रेस्टुरेन्ट हुनुहुन्छ, चेकआउट बचत गरिएको - एक ग्रुपटन कम्पनी।
लिविंगसोकियल स्थानीय व्यवसायले अधिक ग्राहकहरू फेला पार्न र राख्न मद्दत गर्दछ।
बेर जिल्ला एक ई-वाणिज्य प्लेटफर्म हो र मिडिया सम्पत्ति मामुहरू र उनीहरूको आवश्यकताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
Polyvore एक क्युरेसन र उत्पाद खोज प्लेटफर्म हो। सदस्य क्लिपर उपकरण वा Polyvore बटन मार्फत उत्पाद र पृष्ठभूमि छवि क्लिप। यि छविहरु Polyvore मा सामग्री निर्माण र उपयोगकर्ता खोज को लागी उपलब्ध छन्।
स्काउटमोब किनमेलकर्ताहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्मित उत्तम चीजहरूका साथै कथा र दर्शनले जडान गर्दछ जसले ती सृजनाहरूलाई जीवनमा ल्याउँदछ।
थ्रिलिस्ट - प्रत्येक हप्ताको दिन, थ्रिलिस्टले आफ्ना ग्राहकहरूलाई एउटा नयाँ सिफारिस गर्नुपर्दछ, नयाँ के उत्तमबाट, गहन अन्तर्गत-रडार ईश्वरतामा। तपाईं विशेष रूपमा चित्रण गर्न अद्वितीय हुनुपर्दछ - तर राम्रो प्रयासको लायक! यहाँ एक महान उदाहरण छ:
तपाईंको स्पट किन्नुहोस् - ठूलो दर्शकहरूमा पुग्नुहोस् र नयाँ वस्तुहरू स्थानान्तरण गर्न र भेट्ने समयहरू भर्ने वास्तविक समय सम्झौताहरू प्रस्तुत गरेर नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस्!
टैग: eversavefabfab.comगिल्टसिटीगुगल प्रस्तावहरूgrouponजीवित सामाजिकबेर जिल्लापोलिभोरस्काउटमोबथ्रिलिस्टyipit